"दलहरुको सभा, सम्मेलन, अधिवेशन र जनताका मेला, महोत्सव, भीडले कोरोना फैलायो "
काठमाडौं-कोरोना भाइरस फेरि द्रुत गतिमा फैलिन थालेको छ। यसको संक्रमण देशव्यापी देखिएको छ। सीमावर्ती सहर र मुख्य सहरमा दैनिक संक्रमितको संख्या उच्च छ। देशभर मंगलबार २२ हजार ८ सय २८ नमुना परीक्षण गर्दा १० हजार २ सय ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नै पछिल्लो समयको सबैभन्दा उच्च दैनिक संक्रमण हो।
परीक्षण गरेकामध्ये झन्डै ५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। यससँगै मृत्युदर पनि सुरु भएको छ। मंगलबार एक जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बढ्दो सहरकेन्द्रित संक्रमणले गाउँमा पनि फैलिने जोखिम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा.संगीता कौशल मिश्राका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४४ पुगेको छ। पुस दोस्रो सातासम्म संक्रमणदर दुई प्रतिशत हाराहारी थियो। मंगलबार संक्रमणदर ४४.९ प्रतिशत पुगेको छ। ‘संक्रमित दैनिक बढेका छन्। संक्रमणदर पछिल्लो समय उच्च छ’, प्रवक्ता डा. मिश्राले भनिन्, ‘यो दर अझै बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि हुँदै गएको छ। मुलुकभर दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितमध्ये उपत्यकामा झन्डै ५० प्रतिशत हुने गरेको डा। मिश्राको भनाइ छ। मंगलबार काठमाडौंमा मात्रै ४ हजार ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा दोब्बर बढी हो। ललितपुरमा ९ सय ४७ र भक्तपुरमा ५ सय ७० जना संक्रमित थपिएका छन्।
आगामी तीन साता संक्रमणको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने स्वाथ्यविज्ञ बताउँछन्। दैनिक संक्रमित २० हजार ५ सय नाघ्ने मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलको आकलन छ। ‘माघ दोस्रो सातादेखि तेस्रो सातासम्म संक्रमणदर अझै बढ्छ। आगामी तीन साता जोखिपूर्ण छ’, सचिव डा.पोखरेलेले भने। उनका अनुसार डब्लूएचओ र स्वास्थ्यका विभिन्न ‘टुल’ प्रयोग गरी संक्रमण फैलावटको अनुमान गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित छन्।
सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयजनघनत्व बढी भएका सहरी क्षेत्रमा मास्क लगाउने गरेको पाइँदैन। दूरी कायम भएको देखिँदैन। भीडभाड कायमै छ। यसले संक्रमण बढाउनमा मद्दत गरिरहेको छ।
– डा.जीडी ठाकुर
निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा उपत्यकामा काठमाडौं र कास्कीको पोखरा बढी जोखिममा छन्। यसबाहेक तराईका सहर पनि संक्रमणको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।
भारतसँग खुला सीमा जोडिएको पर्सामा एक सातायता संक्रमणदर ६० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ। पर्सामा वीरगन्ज नाका र नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुँदै आएको छ। नारायणीमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमणदर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको प्रयोगशाला प्रमुख सूक्ष्मजीव विज्ञ डा। प्रभाकर पाण्डेले बताए। सोमबार बेलुकी ५३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ६८ प्रतिशत अर्थात् ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
नाकास्थित हेल्थ डेस्क इन्चार्ज डा. अनिषा महतोका अनुसार माघ सुरु भएयता दैनिक औसतमा २५ जना संक्रमित भेटिने गरेको छ। पुस १५ सम्म दैनिक १–२ र त्यसपिछ मसान्तसम्म १५ जनासम्ममा संक्रमण देखिने गरेको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार पर्सामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ९१ छ। परीक्षण बढाउने हो भने संक्रमणदर धेरै पुग्ने नारायणीका कोभिड संयोजक डा। उदयनारायण सिंहले बताए। भने, ‘एक त अहिलेको भेरियन्ट पहिलेभन्दा धेरै संक्रामक छ। अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय प्रभावकारी रूपमा अपनाइएको छैन।’
चितवनमा मंगलबार २ सय ४६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको संख्या १ हजार नाघेको छ। यीमध्ये १ हजार ८७ जना होम आइसोलेसनमा छन्। ४० जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। सक्रिय संक्रमित ५ सय नाघेपछि जिल्लालाई उच्च जोखिम क्षेत्र रेड जोनमा राखिएको छ। नयाँ भेरियन्टका कारण संक्रमणदर बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले बताए।
खुला सीमाका कारण नरोकिएको आवातजावत र भीडभाडले रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। पछिल्लो सातामै सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ सय नाघेको छ। यससँगै जिल्ला संक्रमणको ‘रेड जोन’ मा परेको छ। भारतबाट आउनेहरू परीक्षणबिनै गन्तव्यमा पुगेका छन्। संक्रमितहरू सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा संक्रमण झन् बढेको छ। तर, अधिकांश स्थानीयवासीले मास्कसमेत लगाएका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशकै ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका १५ चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। अस्पतालका निर्देशक डा.भरतबहादुर खत्रीका अनुसार अस्पतालको मातृ संस्था पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढिरहेका केही विद्यार्थी पनि संक्रमित भएका छन्। स्त्री रोग विभागका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या संक्रमितमध्ये धेरै रहेको निर्देशक डा. खत्रीले बताए।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजमा सात चिकित्सकसहित १० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भरतपुरको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा तीन चिकित्सकसहित ४० जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकसहित ३० जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। यीमध्ये १२ जना चिकित्सक मात्रै छन्।